အမေဇုံအတွက်အကောင်းဆုံးသောကြာနေ့ 2019 အရောင်းအ ၀ ယ် Gadget သတင်း
အမေဇုံအတွက်အကောင်းဆုံးသောကြာနေ့ 2019 အပေးအယူ
ယနေ့နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်၊ အနက်ရောင်သောကြာနေ့ကိုတရားဝင်စတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက်မျှော်လင့်ထားသည့်နေ့ရက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် ခရစ်စမတ်ဈေးဝယ်ခြင်းအတွက်ငွေအများကြီးချွေတာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသောအပေးအယူအချို့ကိုရက်ပေါင်းများစွာတင်ထားခဲ့ပြီးပြီ။ Amazon သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောကမ်းလှမ်းချက်များအားလုံးကိုယနေ့အခွင့်ကောင်းယူရန်နောက်ဆုံးသောနေ့ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပက Black သောကြာနေ့ကိုအဓိကကမကထပြုသည့်အမေဇုန်သည်ထိုအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားစမတ်ဖုန်းများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက်များ၊ လက်တော့ပ်များ၊ ကွန်ပျူတာများမှရှာဖွေနိုင်သည့်ကမ်းလှမ်းမှုအမြောက်အများကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ Black ကသောကြာနေ့ 2019 မှာအကောင်းဆုံးအပေးအယူ။
[မွမ်းမံ: 29-11-2019 15:30]
Amazon ကငါတို့ကိုခွင့်ပြုတယ် ဝယ်ယူမှုအတွက်လစဉ် ၄ ကြိမ်ပေးချေမှု၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုများပြားသောပမာဏကို ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်လစဉ်ငွေပေးချေမှုလေးခုတွင်အဆင်ပြေစွာပေးဆောင်နိုင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဤငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုရရှိနိုင်သည် 75 မှ 1000 ယူရိုကနေပမာဏသည် နှင့် Cofidis ခွင့်ပြုချက်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းသည်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက်ရရှိနိုင်ပါက၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်း၏နောက်ဆုံးစျေးဘေးတွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။
Black သောကြာနေ့တွင်အကောင်းဆုံးအိမ်အလိုအလျောက်အရောင်းအ ၀ ယ်
1 အမေဇုံဂီတ Unlimited
4.1 iPhone ကို
4.3 Xiaomi က
4.4 Motorola က
5 consoles စ
6 Tablet အရောင်းအ ၀ ယ်
8 ကွန်ပျူတာများနှင့် laptop များ
အမေဇုံမှလူငယ်များကကျွန်ုပ်တို့အားလစဉ်ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုလေးလပေးသည် အမေဇုံဂီတအကန့်အသတ်သာ 0,99 ယူရိုကျနော်တို့လက်လွတ်မပေးနိုငျသောမြှင့်တင်ရေး။ Amazon ၏ streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Spotify နှင့် Apple Music နှစ်ခုလုံး၌တူညီသောကတ်တလောက်ပေးထားသည်။
ဒါပေမယ့်ငါတို့ရဲ့အရာကဂီတမဟုတ်ဘူး၊ ဖတ်တာဆိုရင်တော့ငါတို့ကြိုးစားနိုင်တယ်0ယူရိုသာလျှင်သုံးလအတွက်၊ Amazon Kindle Unlimited စာအုပ် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေါင်း ၁ သန်းကျော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောအချိန်နှင့်ဘယ်နေရာကိုမဆို download လုပ်၍ ဖတ်နိုင်သည်။
ဒီအနက်ရောင်သောကြာနေ့ 2019 အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အသံအကြံပြုချက်များ
စပီကာ အမေဇုံပဲ့တင်သံတတိယမျိုးဆက် သာအဘို့အရရှိနိုင်ပါသည် 22 ယူရို။ ပုံမှန်စျေးကတော့ယူရို ၅၉.၉၉ ပါ။
ပဲ့တင်သံပြရန် 5, အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူစပီကာများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် 49,99 ယူရို။ ပုံမှန်စျေးကတော့ယူရို ၅၉.၉၉ ပါ။
Fire Stick တီဗီကျွန်ုပ်တို့၏တီဗီဟောင်းကိုစမတ်အဖြစ်ပြောင်းရန်အတွက်ရနိုင်သည် 24,99 ယူရို၎င်း၏ပုံမှန်စျေးနှုန်း 39,99 ယူရိုနှင့်အတူ။
ဗားရှင်း Fire Stick 4K Ultra HD၎င်းသည်ပုံမှန်စျေးနှုန်း ၅၉.၉၉ ယူရိုရှိပြီးရက်အနည်းငယ်မျှအဘို့၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရနိုင်သည် 39,99 ယူရို။
အမေဇုံပဲ့တင်သံ 3rd Gen သာရရှိနိုင်ပါသည် 64,99 ယူရို။ ပုံမှန်စျေးကတော့ယူရို ၅၉.၉၉ ပါ။
Socket အတွင်းသို့ပလပ်နေသော Echo စပီကာ၊ ပဲ့တင်သံ Flex, အဘို့အရရှိနိုင်ပါသည် ယူရို ၆.၉၉၊ ၎င်း၏ပုံမှန်စျေးနှုန်း 10 ယူရိုပိုစျေးကြီးသောအခါ။
Fire TV အတွက် Alexa နှင့်လိုက်ဖက်တဲ့အဝေးထိန်း ၎င်းတွင်ပုံမှန်စျေးနှုန်း ၂၉.၉၉ ရှိပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ယူရို ၂၃.၉၉ ဖြင့်ဝယ်နိုင်သည်။
11GB နှင့်အတူ iPhone 64 ကို သိုလှောင်မှုကို Amazon အတွက်ရှာ 763,62 ယူရို။ ၎င်း၏ပုံမှန် App စျေးနှုန်းမှာယူရို ၈၀၉ ဖြစ်သည်။
11GB သိုလှောင်မှုနှင့်အတူ iPhone 128၎င်းသည်ရောင်းရန်သာဖြစ်သည် 827,67 806 ယူရို, ၄၅ ယူရိုသည် Apple Store တွင်ရရှိနိုင်သည့်စျေးနှုန်းထက်နိမ့်သည်။
iPhone 11 Pro 64GBရုံများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် 1111 ယူရို၈၀ ယူရိုသည် Apple Store ထက်စျေးသက်သာသည်။
iPhone 11 Pro 256GBရုံများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် 1233 ယူရို၈၀ ယူရိုသည် Apple Store ထက်စျေးသက်သာသည်။
iPhone ကို XR သိုလှောင်မှု 64GB အတွက်ရရှိနိုင်ပါ 699 ယူရို။ Apple Store မှာ ၇၀၉ ယူရိုရှိတယ်။
Samsung ရဲ့ Galaxy S10ရရှိနိုင်သော ၆.၁ လက်မမော်ဒယ်လ် 649 ယူရို။
Samsung ရဲ့ Galaxy S10 + ၆.၄ လက်မနှင့်သိုလှောင်နိုင်မှု 6,4 GB ရှိသည် 729 ယူရို
Samsung Galaxy M30s ၆.၄ လက်မမျက်နှာပြင်၊ RAM 6,4 GB၊ သိုလှောင်မှု ၆၄ GB နှင့်ကင်မရာသုံးဆမြင့်သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် terminal ကိုရရှိနိုင်သည် 219 ယူရို။
El Samsung ရဲ့ Galaxy M204 GB RAM နှင့် 64 GB Internal Storage ပါရှိပြီး ၆.၃ လက်မမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားပါသည် 189 ယူရို။
El Xiaomi က Mi 9T ၎င်းတွင် ၆.၃၉ လက်မအရွယ် AMOLED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ရှေ့မျက်နှာ၌မည်သည့်အရာမျှမပါရှိဘဲကင်မရာသည်ဖုန်း၏ထိပ်ဘက်ရှိ pop-up ပုံစံဖြင့်တည်ရှိသည်။ အနောက်ဘက်တွင် 6,39,3နှင့် 48 mpx ကင်မရာ ၃ လုံးစီအသီးသီးရှိသည်။ ၎င်းတွင် NFC chip၊ ၄၀၀၀ mAh ဘက်ထရီ၊ ၆ GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှု ၆၄ GB ရှိသည်။ စျေးနှုန်း: 291 ယူရို။
El Xiaomi က Black ကငါးမန်း2Pro ကို, အမေဇုံတွင်ရရှိနိုင်သည် 699 649 ယူရိုသိုလှောင်မှုပမာဏ ၂၅၆ GB၊ Snapdragon 12 Plus ပရိုဆက်ဆာ၊ SIM ကဒ်နှစ်ခုနှင့် ၆.၃၉ လက်မဖန်သားပြင်တို့ပါဝင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။၅.၉၉ လက်မမျက်နှာပြင်၊ ၆ GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှု ၆၄ ဂရမ်ပါရှိသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည် Qualcomm Snapdragon 5,99 မှစီမံသည်။ ၎င်းကိုသာရရှိနိုင်သည် 299 ယူရို။
Motorola One Zoomကျောဘက်မှာ ၆.၄ လက်မမျက်နှာပြင်၊ 6,4 GB RAM နှင့်4GB သိုလှောင်မှု၊ dual-SIM နှင့် 128-camera စနစ်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဒါဟာအဘို့အရရှိနိုင်ပါသည် 349 ယူရို။
Motorola E6 Plus အားသိုလှောင်မှု 32 GB နှင့်2ယူရိုအတွက် 109 GB RAM ကိုအတူ။
Motorola G7 Plus အားကစားပါ, ၅.၇ လက်မဖန်သားပြင်၊ ၁၁၉ ယူရိုအတွက် dual SIM အသုံးပြုနိုင်သည်။
OnePlus 6, AMOLED မျက်နှာပြင် ၆.၂၈ လက်မရှိပြီးစမတ်ဖုန်း၊ RAM 6,28 GB နှင့် Qualcomm Snapdragon 8 ပရိုဆက်ဆာနှင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ 349 329 309 ယူရို။
OnePlus 6Qualcomm ၏ Snapdragon 845 နှင့် 8GB RAM နှင့် 128GB storage တို့ပါ ၀ င်သည်။ Amazon အတွက် 419 409 ယူရို။
Realme X2 Pro ကို - ၆.၅ လက်မ SuperAMOLED စမတ်ဖုန်း၊ RAM 6,5 GB နှင့်သိုလှောင်မှု ၂၅၆ GB၊ ၈-core ပရိုဆက်ဆာနှင့်ကြီးမားသော ၄၀၀၀ mAh ဘက်ထရီတို့ပါရှိသည်။ ရရှိနိုင်ပါသည် 499 449 ယူရို။
Xbox One ကြိုးမဲ့ Controller အားဖြင့် 41,99 ယူရို။
Xbox One မှာ S ကို နှုန်း 1 controller ကို + ဂီယာ5ဂိမ်း 189,90 ယူရို။ စျေးနှုန်းအတူတူပင်အတွက် PUBG, Star Wars Jedi: Fallen Order, Battefield V သို့မဟုတ် Division5နှင့်အတူ Gear2အစား Xbox One S ကို ၀ ယ်နိုင်သည်။
ဝယ်ရန်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကမ်းလှမ်းချက် Xbox One မှာ S ကို ပိုက်ဆံနည်းနည်းဖြင့် Fortnite၊ Sea of ​​Thieves နှင့် Minecaft တို့ပါ ၀ င်သည့်အထုပ်ထဲတွင်တွေ့ရသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံဖြင့်ဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်း: 129 ယူရို။
Xbox One X 1 တီဘီ + 1 controller ကို + Metro ထှကျမွောကျရာစုဆောင်းခြင်း 320 ယူရို။ Xbox One S ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ Metro Exodus Collection ဂိမ်းများအစား PUBG၊ Division 2, Star Wars Jedi: Fallen Order or Gears5စသည့်ကွဲပြားခြားနားသော pack များကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
အမေဇုံဖြစ်ပါတယ်နေစဉ် မိုက်ကရိုဆော့ဖ် Xbox ခလုတ်များဝယ်ယူရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်PlayStation4ကို၎င်း၏မူကွဲနှစ်ခု (သို့) Nintendo consoles စ်များတွင် ၀ ယ်ရန်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။
Tablet အရောင်းအ ၀ ယ်
အိုင်ပက် 2019 သိုလှောင်မှုပမာဏ 128GB နှင့် ၉.၇ လက်မမျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည် 472 ယူရို အမေဇုံ။
El ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် 74,99 ယူရို သိုလှောင်မှု4GB နှင့်အတူ။ ပုံမှန်စျေးကတော့ယူရို ၈၉.၉၉ ပါ။
La Amazon Fire7Tablet၇ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်သိုလှောင်မှု ၁၆ GB ရှိသည့်အတွက်၎င်းသည်ပုံမှန်ဈေးနှုန်းဖြင့် ၂၀ ယူရိုလျှော့စျေးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ 49,99 ယူရို။
El Kindle Paperwhite eReader ၆ လက်မအရွယ်ယူရို ၃၀ လျှော့စျေးဖြင့်နောက်ဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်သည် 99,99 ယူရို။
အိုင်ပက်လေ (2019) ၁၀.၅ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်သိုလှောင်မှု 10,5 GB ရှိသည့်အတွက်၎င်းကို Wi-Fi ဗားရှင်းတွင်ရနိုင်သည် 510 ယူရို.
AirPods ကြိုးမဲ့အားသွင်းအမှုနှင့်အတူဒုတိယမျိုးဆက် 179 ယူရို။ App Store မှာ ၂၂၉ ယူရိုရှိတယ်။
တီဗီ Samsung 4K UHD ၄၉ လက်မ HDR နှင့် Alexa နှင့်လိုက်ဖက်သည်။ အားဖြင့် 49 မော်ဒယ် 599 569 ယူရို။
တီဗီ ၆၅ လက်မအရွယ် Samsung 4K UHD HDR နှင့်အတူ Alexa by Alexa နှင့်လိုက်ဖက်သည် 819 ယူရို။
တီဗီ LG 65-inch 4K UHD, HDR သည် Alexa နှင့် Google Assistant နှင့်လိုက်ဖက်သည် 779 749 ယူရို။
တီဗီ LG 55-inch 4K UHD, HDR သည် Alexa နှင့် Google Assistant နှင့်လိုက်ဖက်သည် 579 569 539 ယူရို။
တီဗီ 55 လက်မအရွယ် 4K UHD Sharp ဖြစ်သည် အားဖြင့် 499 ယူရို။
ကွန်ပျူတာများနှင့် laptop များ
MSI Prestige ၁၅.၆ လက်မ Laptop၊ Intel Core i7၊ 16 GB RAM၊ SSD သိုလှောင်မှု ၁ TB၊ operating system မပါပဲ GTX 1 1650GB 1.275 ယူရို။
Acer Nitro5၁၅.၆ လက်မ Laptop၊ Intel Core i7 ပရိုဆက်ဆာ၊ 8 GB RAM၊ 1 TB HHD နှင့် 128 GB SSD၊ Nvidia GTX 16504GB ဂရပ်ဖစ်များဖြင့် Windows 10 Home operating system ဖြင့် 849 ယူရို။
HP ကအတိတ်နိမိတ်, ၁၅.၆ လက်မအရွယ်ရှိ laptop တစ်လုံး၊ Intel i15,6 ပရိုဆက်ဆာ၊ 7GB RAM၊ 16TBB + 1GB SSD၊ NVIDIA RTX 256 2070GB operating system မပါဘဲဖြင့် 1.299 ယူရို။
Microsoft က Surface Pro 6, ၁၂.၃ လက်မအရွယ်အစားရှိသော Intel i12,3 ပရိုဆက်ဆာ၊ ၈ GB RAM နှင့်5GB သိုလှောင်မှုဖြင့် Amazon တွင်သာရှာနိုင်သည် 822,95 ယူရို။
Desktop HP က OMEN Obelisk Intel Core i5 ပရိုဆက်ဆာ၊ 16 GB RAM၊ 1 TB HHD နှင့် 256 GB SSD၊ GTX 1060 ဂရပ်ဖစ်များဖြင့် operating system မပါ ၀ င်ပါ။ 879 ယူရို။
ခရီးဆောင် ၁၅.၆ လက်မ Lenovo Idepad, Intel Core i7 ပရိုဆက်ဆာနှင့် 8 GB RAM၊ 256 GB SSD၊ ဂရပ်ဖစ်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည် 499 ယူရို။
ခရီးဆောင် 14-inch HP PavilionIntel Core i5၊ 8 GB RAM၊ 256 GB SSD၊ ဂရပ်ဖစ်များကို Windows 10 ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်မည် 649 ယူရို။
Logitech G933 Artemis Spectrum သည်ကျွမ်းကျင်သော ၇.၁ အသံနှင့်ပါ ၀ င်သည် 89,90 ယူရို။
၃၄ လက်မကွေးကောက် Samsung မော်နီတာ, QHD resolution, 100 Hz, 21: နှုန်း9ရှုထောင့် 599,99 ယူရို။
၂၇ လက်မ Philips ကွေးကောက်စက်, Full HD resolution, HDMI နှင့်ကွေးနေသော Displayport မှ 149,99 ယူရို။
BenQ ၂၄.၅ လက်မဂိမ်းမော်နီတာ, Full HD resolution၊ HDMI, DVI နှင့် VGA တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် 109,99 ယူရို။
၂၈ လက်မ AOC မော်နီတာ Full HD resolution ဖြင့် HDMI ဆက်သွယ်မှုဖြင့်ပြုလုပ်သည် 67,99 ယူရို။
၂၃.၈ လက်မ Lenovo Monitor Full HD resolution, VGA နှင့် HDMI ဆက်သွယ်မှုတို့ဖြင့်ပြုလုပ်သည် 87,99 ယူရို။
Corsair ဂိမ်းကီးဘုတ်, RGB backlit, anti-ghosting အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ, Windows ကိုသော့ခတ်နှင့်ချိန်ညှိ tilt အားဖြင့် 59,90 49,90 ယူရို။
Logitech ကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ် ကြိုးမဲ့ 39,99 ယူရို။
Razer Basilisk Mouse ကို 16000 dpi optical sensor နှင့် cable ပါ ၀ င်ပြီး scroll wheel ကိုထိန်းညှိနိုင်သော dial တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ရရှိနိုင်ပါသည် 49,99 ယူရို။
Logitech MX Master Mouse, ၎င်း၏ပထမဆုံးမျိုးဆက်တွင်စျေးကွက်ထဲရှိအကောင်းဆုံးကီးဘုတ်များထဲမှတစ်ခုကိုရရှိနိုင်သည် 42,99 ယူရို။
HyperX mouse pad ၉၀ × ၃၂ စင်တီမီတာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ mouse ကိုအများဆုံးတိကျစေရန်။ ရရှိနိုင်ပါသည် 28,90 ယူရို။
streaming များအတွက်ဗွီဒီယိုဖမ်းယူ Razer Ripsaw HD ကို ရရှိနိုင်ပါသည် 109,99 99,99 ယူရို။ ပုံမှန်စျေးကတော့ယူရို ၅၉.၉၉ ပါ။
Netgear R6700 Router ရရှိနိုင်ပါသည် 99,90 ယူရို။
Apple Watch Series4သည်ယနေ့ခေတ်တွင်စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးသော smarwatches များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခင်မျိုးဆက်မှလက်ရှိထုတ်လုပ်သည့်စက်များအထိဖြစ်သည်။ 40 မီလီမီတာဗားရှင်း အားဖြင့် 339 ယူရို။
El 4mm ဗားရှင်းရှိ Apple Watch Series 44 များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် 369 ယူရို။
Huawei Watch GT အားကစား၊ GPS ဖြင့်နှလုံးခုန်နှုန်းမော်နီတာအတွက် Amazon တွင်ရနိုင်သည် 109 ယူရို.
ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း Q Grantကာယလှုပ်ရှားမှုများကိုတိုင်းတာသည်၊ အကွာအဝေးခရီးသွားခြင်း၊ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ပြီး iOS နှင့် Android နှစ်ခုလုံးနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ ရရှိနိုင်ပါသည် 120,33 ယူရို။
Samsung ရဲ့ Galaxy Active ကိုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များနှင့်ချော၌တည်၏ 199 ယူရို။
Samsung ရဲ့ Galaxy စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့၄.၆ မီလီမီတာ၊ ၁.၃ လက်မဖန်သားပြင်၊ သိုလှောင်မှု 46 GB၊ built-in GPS နှင့်ရေစိုခံနိုင်သည့်စနစ်ရှိသည် 232 ယူရို။
Samsung Gear Sport, ကျွန်ုပ်တို့၏အားကစားလှုပ်ရှားမှုများကိုတွက်ချက်ရန်စံပြသည်အမေဇုန်တွင်ရှိသည် 149 ယူရို။
Philips မှ Hue အဖြူနှင့်အရောင် LED စင်း အားဖြင့်အားလုံးစျေးကွက်လက်ထောက်တွေနဲ့သဟဇာတ 79,95 ယူရို။
Osram စမတ်မီးသီးများအတွက် E27 socket နှင့်အတူ 24,94 ယူရို။
Xiaomi မှနေ့ 9W အရောင်မီးသီးနှင့် 600 lumens နှုန်း 23,56 ယူရို။
ဖုန်စုပ်စက် Roomba 671 Alexa နှင့်လိုက်ဖက်ညီသောကြမ်းပြင်ဖုန်စုပ်စက်၊ သုံးထားသောစကားစုသန့်ရှင်းရေးနှင့်လိုက်ဖက်ညီစွာရရှိနိုင်ပါသည် 179,99 ယူရို။
ဖုန်စုပ်စက် iRobot Roomba 960Alexa မှအဆင်ပြေသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်သင့်တော်သောဖုန်စုပ်စက်သည် ၅ ဆပိုမိုသောစုပ်ယူနိုင်စွမ်းပါရှိသည် 389 ယူရို။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » အမေဇုံ » အမေဇုံအတွက်အကောင်းဆုံးသောကြာနေ့ 2019 အပေးအယူ
KADRILJ ကျနော်တို့ IKEA စမတ်မျက်မမြင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
Black Friday အတွက်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် 10% လျှော့စျေး